Vaovao - Fifaninanana fahaiza-manao momba ny asa voalohany an'i Yucera
Nanomboka tamin'ny 12 Jolay ny fifaninanana fahaiza-manao asa voalohany nataon'i Yucera ho an'ny fitaovana blokche zirconia faha, izay notohanan'ny Biraon'ny General Manager. Nozaraina telo ny hetsika iray manontolo: fisoratana anarana sy fandinihana, fifaninanana eo an-toerana, ary sarin'olon-droa manome loka. Mpifaninana maherin'ny 30 no nirotsaka tamin'ny asan-dahalo ho an'ny zirconia cad cam blocks amin'ny fanindriana maina, fanerena isostatika mangatsiaka, fanodinana endrika, fanontana ary famonosana sns.
Mba hahatratrarana vokatra tsara amin'ity fifaninanana ity, ny mpiasa ao amin'ny departemantan'ny famokarana dia nampiasa ny fotoanany malalaka handalinana sy hanao zara, nanadihady ireo toro-hevitra sy teknika hanatsarana ny fahombiazan'ny asa, hanolorana ireo tetika fanatsarana, hanatsarana ny fomba fiasa, ary nifaninana avokoa ny rehetra amin'ity fifaninanana ity amin'ny fizotry ny famokarana cerec zirconia block. Ireo mpiasan'i Yucera dia nampiseho ny fomban'izy ireo ary naneho ny lanjan'ity fifaninanana ity. Taorian'ity fifaninanana asa ity dia nisy vondrona manam-pahaizana teknika manana fahaiza-manao matanjaka, teknika haingana, kalitao azo antoka ary azo itokisana, anisan'izany i Luo Feifei, Fan Mingchun, ary Liu Feihu avy amin'ny dingan'ny fanerena maina, Zhao Xiaoduo avy amin'ny fizotran'ny fanerena isostatika mangatsiaka, ary Jiang Kele izay avy amin'ny fizotran'ny fanodinana endrika, Li Wanxing, Li Jing, Zhong Yulian, izay avy amin'ny fanontana sy ny fonosana. Ity vondrona mpiara-miasa miavaka ity dia niaina tamin'ny andrasana, niasa mafy ary nandresy ny vahoaka nandritra ny fifaninanana ho an'ny fikorontanan'ny nify zirconia, ary nahazo ny tompondaka tamin'ny fifaninanana fizotrany tsirairay, ary nanatsara ny fahombiazan'ny fotoana iasan'ny toerana tsirairay hatramin'ny 10% farafaharatsiny, izay nametraka ohatra amin'ny fanatsarana ny fahaizan'ny mpiasa ho an'ny zirconia oxide block amin'ny ho avy, ary koa nanome referansa ho an'ny fanatsarana ny fenitra amin'ny famokarana zirconia milling block.
Ny mpifaninana rehetra dia nivory teo amin'ny vavahady fidirana lehibe an'ny orinasa handray anjara amin'ny lanonana loka amin'ny 8 ora maraina ny 19 aprilyfaha. Voalohany, Andriamatoa Liu, Tale Jeneralin'ny Yucera, dia naneho hevitra momba ny fifaninanana fahaiza-manao momba ny sakana amin'ny zirconia nify ary nanambara ny valiny sy ny laharan'ny fifaninanana, ary avy eo ireo mpitarika ny sampana mpamokatra dia nanome ny loka. Nanolotra loka ireo mpiasa ary naka sary vondrona. Mpifaninana 7 no nahazo ny anaram-boninahitra “Gold Medal Player” tamin'ity fifaninanana asa ity ho an'ny zirconia milling block, ary nahazo loka 1.000 yuan sy medaly fanamarinana. Ny tanjon'ity hetsika ity dia ny fiantsoana ireo mpiasa rehetra handray ity fifaninanana fahaiza-miasa ity ho fotoana iray hanombohana haingana ny fampitahana, ny fianarana, ny fanovozana, ny fanampiana ary ny fihoarana ao amin'ny sampana ary hiezahana hampivelatra fahaiza-manao tena tsara. mandalina ny fahaizan'ny asa ary manatsara haingana ny fahombiazan'ny famokarana zirconia multilayer block, miantoka ny kalitaon'ny zirconia block sy ny fahatsapana tanjona maro samihafa izay nitondra anjara biriky tsara tamin'ny fampandrosoana haingana an'i Yucera.